'निवास एविल २' रीमेकले ई Tra ट्रेलर र रिलीज मिति प्राप्त गर्दछ! - iHorror
घर भिडियो खेल 'निवास एविल २' रीमेकले ई Tra ट्रेलर र रिलीज मिति प्राप्त गर्दछ!
'निवास एविल २' रीमेकले ई Tra ट्रेलर र रिलीज मिति प्राप्त गर्दछ!
by एरिक पानिको जुन 12, 2018
द्वारा लिखित एरिक पानिको जुन 12, 2018
प्लेस्टेशन E3 सम्मेलनले भर्खरै १ 1998 XNUMX's को पौराणिक अस्तित्व डरावनी क्लासिकको लागि लामो प्रतीक्षा गरिएको रीमेक पत्ता लगायो निवास दुष्ट 2! पछिल्लो बर्ष निवास दुष्ट7पछिल्लो खेलहरू कार्य र छिटो-समय घटनाहरू मा धेरै भारी झुकाव शुरू पछि फ्रैंचाइजीको डरलाग्दो जरा फिर्ती थियो। अब क्यापकमले हामीलाई प्रकोपको सुरूमा फिर्ता ल्याइरहेको छ।
निवास दुष्ट2भय-प्रेरणाको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो, वातावरणीय गेमप्ले फ्रान्चाइजी निर्माण गरिएको थियो, र श्रृंखलाको सबै भन्दा राम्रो खेलहरू मध्ये एक हो। पहिलो निवास दुष्ट २००२ मा एक अत्यन्तै सफल एचडी रीमास्टर फिर्ता प्राप्त भयो, र प्रशंसकहरूले त्यसबेलादेखि अचम्मित भएका छन् निवास दुष्ट2समान उपचार प्राप्त हुनेछ।
ठिक छ, पर्खाइ अन्तमा सकियो।
ट्रेलर जिज्ञासु परिप्रेक्ष्यबाट खुल्छ जब हामी भण्डारण तानाहरूसँगै क्रल हुन्छौं, र एक पुलिस अफिसरले देखेको छ कि एक अदृष्य संदिग्धसँग झगडा हुन्छ। शेल्फको रूपमा हामीलाई टिप्समा समेटिएको थियो, यसले पत्ता लगाउँछ कि हामीले यो घटनालाई (अहिले कुचिएको) माउसको आँखाद्वारा देखीरहेका छौं। अफिसर दृश्यमा खस्छ, जसरी पेपरले उसका दाँतहरू सिपाहीको घाँटीमा डुबायो र विशाल मासुको टुक्रा च्याते।
एक शट बाहिर बज्यो, र जोम्बी निर्जीव (जस्तै, वास्तवमा मृत) जमिनमा खस्छ किनकि लुकी लियोन क्यानेडी ढोकामा धुम्रपानको छेउमा उभिरहेको आफ्नो हातमा देखिन्छ। ट्रेलरले त्यसपछि हामीलाई ग्रन्ज, चिच्याई, र खूनी sinew को एक cacophony साथ हिट।
क्यापकमले आतंकलाई ११ सम्म क्र्यांक गरेको छ किनकि ट्रेलरको स्वर गहिरा र अधिक गहिरो भएको छ (धेरै त्यस्तै शिरामा निवासी एविल))। हामी पनि कठोर क्लेयर रेडफिल्ड उनको विजयी फिर्ती बनाउने देख्न सक्छौं।
र्याकुन शहर अरू भन्दा आश्चर्यजनक कहिल्यै महसुस भएको थिएन किनकि हामीले परित्यक्त, वर्षा-भिज्ने सडकहरूबाट डरलाग्दो, रगतले भिजेको भित्री भागमा कट्यौं। ट्रेलरले गतिशील, डरलाग्दो प्रकाश, र अतुलनीय चरित्र मोडेलको साथ डरलाग्दो अनुहारको दृश्यहरूको गर्व गर्दछ। कारहरू जलेको छ, जम्बीहरू सबै कुनाको वरिपरि डरलाग्दो छ, र हामी हाम्रा घृणित सताउने केहि घिनलाग्दा चीजहरू पनि देख्छौं। लाश, र लाइकरहरू, र निरंकुश ... ओह मेरो।
GameSpot रिपोर्टले प्रेस विज्ञप्तिले गेमप्ले पछाडि सर्छ भनेर पुष्टि गर्दछ निवासी ईविल7को पहिलो व्यक्ति पीओभ तेर्सो व्यक्तिलाई काँधमा। जहाँसम्म, गेमप्ले छिटो-छरितो कार्यको विपरित विचित्रसँग डरलाग्दो दृश्यमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। Zombies पनि वास्तविक समय मा "तत्काल दृश्यात्मक क्षति" लिने रिपोर्ट गरिएको छ।
धन्यबाद, प्रशंसकहरूले एकपटक फेरि र्याकन शहरको जोम्बी भरिएका सडकहरूमा हिंड्न धेरै लामो कुर्नु पर्दैन। ट्रेलर जनवरी 25 को एक रिलीज मिति पुष्टि समाप्त हुन्छth, २०१.। प्रिअर्डरहरू अब प्लेस्टेशन,, Xbox One, र PC मा खेल खरीद गर्न उपलब्ध छन्।
एउटा कुरा निश्चितको लागि हो ... आवाज अभिनय निश्चित रूपले सुधार भएको छ।
यहाँ ट्रेलर जाँच गर्नुहोस्:
तपाईं ट्रेलरको बारेमा के सोच्नुहुन्छ ?! के तपाई राकुन शहरमा फर्कन उत्साहित हुनुहुन्छ? टिप्पणीहरूमा तपाईंको विचार पोष्ट गर्नुहोस्!
बायोहार्डबायोहार्ड २CapcomE3निवास दुष्टनिवासी बुद्ध 2
'वंशानुगत' A24 सबैभन्दा धेरै बक्स अफिसमा खोल्ने हो
'डेथ स्ट्र्रेन्डिंग' E3 ट्रेलर वाह अप सीधा माथि अजीबता
क्राइप्ट टिभी र 'डेलाइटद्वारा मृत' टीम अप ...
'एभिल वेस्ट' रुटिन, टोटिन सिक्स-शूटिन र राक्षसहरूलाई मिलाउँछ ...
अप्रिल 22, 2021
'निवासी एभिल गाउँको' नयाँ ट्रेलरले अझ रहस्यहरू पत्ता लगायो
डिनो शूटर 'दोस्रो विलुप्त' अप्रिलमा आउँदैछ
अप्रिल 6, 2021
एचपी लभक्राफ्टको 'अर्खम डरावनी: आमाको अंगालोले' डुबायो ...
अप्रिल 2, 2021
'निवास एविल रे: पद' ओटा बेटा यो अप्रिल आउँदैछ
'स्टुब्स द ज़ोन्बी: विद्रोही नाडी बिना' ...
'किशोर उत्परिवर्ती निन्जा कछुए: श्रेडरको बदला' ले हामीलाई लिन्छ ...
'एलियंस: फायरटेम' ट्रेलरले तपाई र तपाइँको सह-अप ...
Xenomorph 'फोर्टनाइट' मा ड्रपिंग देखिन्छ ...
फेब्रुअरी 24, 2021
क्याटोरिजहरू ब्राउज गर्नुहोस् श्रेणी चयन गर्नुहोस् अमेजन (चलचित्र) ()) अमेजन (श्रृंखला) ()) AppleTV + (१) ब्लू रे (१) हास्य डर ()१) हास्य ()) फेसबुक (श्रृंखला) (१) कल्पना (२)) फुटेज भेटिए (२१) गोर (२२) HBO (चलचित्र) ()) HBO (श्रृंखला) ()) हरर पुस्तकहरू ()२) हरर मनोरन्जन समाचार (१०,१०10,470) हरर फिल्म (176०) हरर श्रृंखला (२२) हरर सबजेन्स (१) Hulu (श्रृंखला) ()) अन्तर्वार्ता (फिल्म) (२)) अन्तर्वार्ता (श्रृंखला) (१) LGBTQ हॉरर (२ 29) सूचि (चलचित्र) (२)) सूची (श्रृंखला) (१) बजार ()) दानव डर (ror) चलचित्र समीक्षा (११) चलचित्र ()) संगीत (२)) नेटफ्लिक्स (चलचित्र) ()) नेटफ्लिक्स (श्रृंखला) (१)) गैर-कल्पना (१) अलौकिक ()२) मनोवैज्ञानिक डर (थ्रिलर्स) ()०) श्रृंखला समीक्षा (१) Shudder (फिल्म) (२)) Shudder (श्रृंखला) ()) स्लाशर ()) अनौंठो र असामान्य ()०) स्ट्रीमि Movies चलचित्रहरू (१)) स्ट्रीमि Series श्रृंखला ()) खेलौना (१) ट्रेलर (फिल्म) () 135) ट्रेलर (श्रृंखला) (२)) साँचो अपराध () 41) भिडियो खेल (१ 165०) यूट्यूब (फिल्म) (२) यूट्यूब (श्रृंखला) (१०)
पेन र टेलरको पेन जिलेट एलीसँग मिल्छ ...
11 सक्छ, 2021
प्रेम, मृत्यु र रोबोटको लागि आर-रेटेड ट्रेलर हो ...
जेमी बेल इलिजाबेथ काईलाई 'चम्किरहेकी केटीहरू' को लागी सामेल गर्दछ ...
'चाकू आउट आउट' सीक्वेल कास्ट डेभ बाउटिस्टा साइडसँगै ...
उपन्यासमा आधारित: द्वारा: 'म लिजेन्ड हुँ' ...